Ukuphendula okuzenzekelayo kunye nebhegi efriziwe e-China Beyin ukupakisha
OEM kwizinga eliphezulu ibhegi ukutya zeplastiki
Kukho iindlela ezi-2 esiya kuthi sizithathele ingqalelo ukusebenzisa ibhegi efriziwe, 0 ℃ kwaye ngezantsi 0 ℃. Ngelixa izinto ekufuneka zigcinwe ku-0 ℃, uninzi lweengxowa eziqhelekileyo ziya kuba zilungile, ukuba kwiimveliso ezifuna ukugcinwa zingezantsi ko-0 ℃, emva koko ibhegi yenqanaba lomkhenkce iya kufuneka. Eyona bhegi intle iya kuba yinayiloni / Frozen PE.
Itywina Ubushushu ibhegi yokugcina ukutya
Olona hlobo lusetyenzisiweyo lwebhegi yokuphucula kukugcina ixesha elide leemveliso ngaphakathi. Ngelixa ngesiqhelo ukuba ufuna umsebenzi osisiseko, emva koko iPET / i-vacuum PE iyakwanela ukuyisebenzisa, ukuba ufuna ezona zinto zibalaseleyo, iNylon / PE iya kuba lukhetho lwakho. Kakade ke, ngefoyile enokusetyenziselwa ibhegi lwepolitiki.
Ukutya ibhegi yeplastikhi yeplastikhi ye-OEM
Uninzi lweengxowa zokubuyisa luhlobo lweengxowa ezincamathelayo, inokuba yingxowa ethe tyaba okanye ibhegi yokuma, uninzi lweengxowa zokubuyisa azinaziphu, kodwa inotshi yeenyembezi iyafuneka.
China inqwaba zip lock ibhegi spice
Iingxowa zespice zihlala zimile iibhegi okanye iingxowa ezithe tyaba, Kwaye ungongeza nefestile ecacileyo ngaphambili kwiingxowa ukuba abathengi banokubona iziqholo ezingxoweni ngqo.And i-zipper iyacetyiswa kuba inokunceda ukuphinda wenze ibhegi Yandisa ubomi bevenkile kunye nokutsha kwesinongo.